Mashiinka Qaabka Qaabka ee Caadada ah, alaab-qeybiyeyaasha qalabka | Mashiinka ShanGrui
Alaabada Shangruri, xulashooyinka sare, ganacsiga | Mashiinka Shangruri waa mashiinno ku takhasusay qafisyo qaas ah, alaab guri oo ka dhigaya alaab-qeybiyeyaasha qalabka
Kor u qaad meelaha
Mashiinka dhagaxa dhagaxa
Adeegga loo habeeyay
Mashiinka ShanGrui Wood Moosha
Marka loo eego baahiyaha kaladuwan ee macaamiisha si loo habeeyo oo soo saaro mashiin aan caadi ahayn.
Mashiinnada Shangruri ee ku takhasusay soosaarka guddiga kala duwan iyo qalabka alwaaxa alwaaxa, qalabka sameynta qalabka), iyadoo loo eegayo baahiyaha kaladuwan ee macaamiisha loo habeeyo oo soo saaro mashiinka aan caadiga ahayn (sida mashiinka saxaafadda).
Mashiinka Saxaafadda kulul ee ku habboon warshaddii guriga ee dhexdhexaadka ah ama kuwa yar-yar ee ka dhisan
Ku habboon qalabka guryaha ee loo yaqaan 'line' ama yar-yar oo ka mid ah ka baaraandega ah ee guryaha ah, xarkaha guryaha kulul, oo ah albaabka alwaaxka ah, weelka hoose (sanduuqa gudaha) iyo guddiga gudaha ah ee kala duwan: sida plywoodboard, sida plywoodboard. Dharka MDF, Melamine ee Malamine, oo ah maro dab-damis, foil bir ah, alwaax aan dabiici ahayn oo dabiici ah, alwaax dabiici ah oo ah mosaic; Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sidii heerka qalajinta ee gudan, heerka, alwaaxa qurxinta midabka
U habeeyey ubeyn multilayer-ka ah ee mashiinka mashiinka kulul ee kulul ee loo isticmaalo qalabka
Ku habboon qalabka guryaha ee loo yaqaan 'line' ama yar-yar oo ka mid ah ka baaraandega ah ee guryaha ah, xarkaha guryaha kulul, oo ah albaabka alwaaxka ah, weelka hoose (sanduuqa gudaha) iyo guddiga gudaha ah ee kala duwan: sida plywoodboard, sida plywoodboard. Dharka MDF, Melamine ee Malamine, oo ah maro dab-damis, foil bir ah, alwaax aan dabiici ahayn oo dabiici ah, alwaax dabiici ah oo ah mosaic; Sidoo kale waxaa loo istcimaali karaa sidii heerka qalajinta ee dabacsan, heerka, goobta qurxinta midabka.
Mashiinka saxaafada qabow ee loo yaqaan 'Murre'
Saxaafadda qabow Ka dhig geedi socodka koollada qalalan, ma fududa in la soo saaroCillad iyo degumming. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadda albaabka alwaaxa, malabka malabka, qeybinta, isku-darka, ka dib marka lagu daboolo daboolida.Saxaafadda qabowdu way fududahay in la shaqeeyo oo la isticmaalo si fudud. Mashiinka oo dhami wuxuu qaatay qaab dhismeedka ceelka iyo qaabka saxan ee birta oo waa la dhigaa oo dhan. Qaab dhismeedka waa mid adag. Saliida saliida saliidaBirta wareega adag, oo la qariyey, chrome shaati, xoog xasilloon, ma fududa in la sameeyo. Goluhu wuxuu ka samaysan yahay aluminium alfoy. Inta lagu gudajiro gaadiidka masaafada dheer, goluhu wuxuu ka kooban yahay aluminium alumitMa jiri doono wax jabsan. Saxaafadda qabow ee ay soo saartay shirkadeena ayaa soo afjaray shahaadada CE isla markaana si fiican looga iibiyo suuqyada gudaha iyo dibedda. Mashiinnada ShanGrui,Waa doorashadaada kaliya iyo astaan ​​u ah abuurista hantida.
cabirka miiska miiska ee loo habeeyay wuxuu arkay mashiinka la jeexjeexay
Cabbirka miiska miiska ee loo habeeyay wuxuu arkay mashiinka la jeexjeexay.
Mashiinka ShanGrui waa mashiin casriyeysan oo casri ah&Qalabka guryaha ah ee samaynta qalabka ganacsiga oo isku daraya qaabeynta, horumarka, waxsoosaarka, rakibidda, iibinta, iibka iyo adeegga iibka ka dib.
Oo leh koox tayo sare leh oo tayo sare leh, qalab wax soo saarka oo aad u wanaagsan iyo qalab imtixaan. Baadhitaanka badeecada, habka xakameynta tayada tayada ayaa si adag loo hagaajiyaa.
Fikradda hal-abuurka iyo Pragmatism-ka ayaa ku boorriyay alaabada mashiinnada shaashadda ah inay la socdaan baahida suuqa, tikniyoolajiyadda sare ee horumarinta fasalka, adeegga iibka ee kaamilka ah, waxayna abuurtay tayada kaydka mashiinka ee Shangraui.
Usomde 650t Saxaafadda Saxaafadda Saxaafadda kulul
Booqashada labaad ee geedka, guud ahaan TAO iyo farsamayaqaannada farsamayaqaannada waxay go'aansadeen cadaadiska saxaafadda 650t kulul, heerkulka ugu sarreeya ee saxaafadda ayaa gaari kara 180 digrii. Mr. TAO ayaa aad uga wanaagsanaa mashiinnadeenna maadaama uu isku dayay 400t riix oo uu ku jiro warshadeena ugu dambeysay. Laakiin sababtoo ah faafitaanka, waligiis fursad uma helin inuu ka wada hadlo faahfaahinta mashiinka. Booqashadan ka dib, waxaan ku soo dhaweynaynaa si diiran oo aan tusnay qaybaha mashiinka iyo mashiinnada laga soo saaray warshadda. Qayb kasta oo ka mid ah saxan bir ah, qiimaha ayaa si cad loo calaamadeeyay iyo muuqaalka jirka ayaa la bixiyaa. Farsamayaasha ayaa weheliya maalinta oo dhan si ay ula hadlaan isaga, oo ay siiyeen doorashada ugu waxtarka badan. Xitaa isbarbardhiga midabka mashiinka, gaadiid, rakibaadda iyo rarida iyo rarida ayaa sidoo kale laga caawiyaa inay bixiyaan qorshayaal kala duwan.
Mashiinka Shangruri Co., Ltd. waxay ku taalaa Shunde, Gobolka Guangdong
Mashiinka ShanGrui waa mashiin casriyeysan oo casri ah&Qalabka samaynta qalabka guryaha (sida mashiinka saxaafadda) Ganacsiyada) Ganacsiga oo isku dhafan qaabeynta, wax soo saarka, soosaarka, rakibidda, iibka, iibka iyo adeegga iibka. Oo leh koox tayo sare leh oo tayo sare leh, qalab wax soo saarka oo aad u wanaagsan iyo qalab imtixaan. Baadhitaanka badeecada, habka xakameynta tayada tayada ayaa si adag loo hagaajiyaa.
Mashiinnada Shangruri ee ku takhasusay soosaarka guddiga kala duwan iyo qalabka wax soo saarka qoryaha adag (sida mashiinka saxaafadda), iyadoo loo eegayo baahiyaha kaladuwan ee macaamiisha loo habeeyo oo soo saaro mashiinka aan caadiga ahayn.
Haddii aad su'aalo dheeraad ah qabtid, noo qor na soo qor
Waxay u heellan tahay inay bixiso isticmaaleyaasha leh teknolojiyadda iyo adeeg tayo leh.